Drama Live Apk Dhawunirodha Ye Android [App] - Luso Gamer
Drama Live Apk Dhawunirodha Ye Android [App]
Mazuva ano nyanzvi dzinoda kutora mafaera evhidhiyo pamusoro pemaseva akawanda. Izvo zvakavanzika hazvimbotsigire kana kuona zvirimo zvakananga. Nekudaro, iko zvino kubatanidza chishandiso chekupedzisira chevaraidzo chinonzi Drama Live Apk chichabatsira kutepfenyura kusingaperi varaidzo.
Chavanongoda kuita kungo dhawunirodha yazvino vhezheni IPTV App faira kubva pano. Kana vangopedza kurodha mafaera, zvino isa iwo mukati me Android smartphone. Mushure mekunge maitiro apera, zvino tanga chishandiso uye unakirwe zvisingaperi zvirimo.
Maitiro ekushandisa ane diki diki nekuti angangoda akawanda maURL kana mafaera. Mushure mekuisa iwo mafaera uye maURL achabvumira vashandisi veAroid kunakidzwa nepamusoro pezvinyorwa. Saka iwe uri kutsvaga chishandiso chakafanana wobva waisa Drama Live App.
Chii chinonzi Drama Live Apk
Drama Live Apk ndeye yepamhepo bato rechitatu rinotsigirwa nevaraidzo chishandiso chinogonesa mafeni. Kutepfenyura mabhaisikopo asingaperi, Series, TV Shows, Radio, FM uye nezvimwe. Zvese zvavanoda kuita kungo dhawunirodha yazvino vhezheni yeApk chishandiso.
Isu takatoona akawanda emamwe mapuratifomu anozivikanwa epamhepo. Izvo zviri kufamba uye zvakakurumbira pakati pevanoda varaidzo. Asi kuwana iwo mapuratifomu kunoda kunyoreswa uye rezinesi repuro. Kunze kwekunge mushandisi akabudirira kutenga kunyoreswa.
Iwo mafeni haakwanise kuwana main dashboard. Mutengo wepagore wekunyoresa ungapfuura mazana emadhora. Izvo zvinodhura uye hazvigoneki kune avhareji mafeni. Saka tichifunga nezvemahara uye nyore kupinda kunze uko akawanda mamwe mawebhusaiti anowanikwa.
Iyo inopa yakananga yemahara kuwana kune huru yemukati yemahara. Asi muzviitiko zvikuru, mapuratifomu akadaro anogona kukumbira mvumo dzisina basa. Kunze kwekunge vashandisi vakabudirira kubvumidza izvo zvibvumirano, hazvigoneke kuwana zvirimo. Saka tichifunga nezvekuchengetedza pano takaunza Drama Live Android.
zita Vadivelu Comedy Drama Live
zera 8 MB
Package Zita com.sneig.livedrama
Izvo zvemahara kurodha kubva pano nekudzvanya imwe sarudzo. Zvese zvinoda mafeni kuti uite kungo dhawunirodha yazvino vhezheni yeApk chishandiso kubva kune yedu webhusaiti. Wobva waibatanidza mukati me android smartphone uye nyore kuwana main dashboard.
Tichiri kuongorora chishandiso ichi takachiwana chiri nyore uye chine hushamwari. Iyo app haimbopi yakananga mavhidhiyo mukati meiyo huru dashboard. Izvo zvinopihwa neapplication kuwana kwakananga kune main link mabhokisi. Ikozvino kudzvanya ma URL kunobvumira vashandisi kuwana mavhidhiyo.
Rangarira kuti kune matatu akasiyana masosi akawedzerwa. Sarudzo yekutanga inoda FG Code ine nhamba dzechokwadi. Kana mushandisi akatadza kuwana FG Code saka anogona kudyara M3U URL zviri nyore. Izvo zviri nyore kuwana kubva mukati me main panel.
Zvakadaro, vaoni havakwanise kuwana ese macode uye maURL. Sarudzo yekupedzisira yakapihwa mukati meiyo application yakananga Xtream login sarudzo. Ingo nyudza zvitupa zvekupinda uye uwane zviri nyore izvo zveprimiyamu pasina kupokana.
Ichi chishandiso chakasununguka kurodha kubva pawebhusaiti yedu uye hachimbodi kunyoreswa kana kunyoreswa. Ingoiisa mukati me smartphone uye unakirwe zviri nyore mabhaisikopo asina muganho, Series, TV Shows uye Radio mahara. Kana iwe uchida maficha echishandiso wobva waisa Drama Live Dhawunirodha.
Key Zvinyorwa zveApk
Kuisa iyo app kunopa matatu ekutanga sarudzo.
Pinda FG kodhi uye unakirwe zvisingaperi zvirimo.
M3U inoridza zvakare inowanikwa kuti utore akananga mavhidhiyo.
Avo vasingakwanise kuwana mhinduro yakanaka kubva kune ese ari maviri sarudzo
Unokumbirwa kuti upinde zvakananga muXtream uchishandisa kodzero yekupinda magwaro.
Maitiro Ekudhawunirodha Drama Live Apk
Iyo IPTV Application inowanikwa kurodha kubva Play Store. Asi nekuda kwezvimwe zvinhu zvakakosha, zvakakamurwa muchikamu chinorambidza. Zvinoreva kuti chete mafoni e-android anokodzera anotenderwa kurodha yazvino Apk faira.
Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi venhare mumamiriro ezvinhu akadaro, ivo vasingakwanise kuwana mafaera? Saka mumamiriro ezvinhu akadai, tinokurudzira vashandisi kuti vashanyire webhusaiti yedu uye vafarire mavhidhiyo asingaperi. Ingo tebhu pamusoro pekurodha bhatani rekubatanidza uye nyore kuwana Apk faira.
Chishandiso chatiri kuratidza pano ndechepakutanga. Zvinoreva kuti mafeni evaraidzo anogona kurodha uye kuisa nyore pasina kunetseka. Rangarira usati wapa iyo App mukati yekurodha chikamu, isu takatoiisa pamusoro pemafoni akasiyana uye tisingakwanisi kuwana chero dambudziko mukati.
Zvakawanda zvezvimwe zvevaraidzo zvine chekuita nekunyorera zvinoburitswa pano pane yedu webhusaiti. Kuti uongorore maapps ehukama ndapota tevera zvinongedzo. Zviri SplikTV Apk uye Wovie TV Apk.
Saka iwe wakatarisana uye uchitsvaga online echokwadi sosi. Izvo zvinobvumira mafeni kuti afambise asingaperi premium mavhidhiyo anosanganisira redhiyo yemahara. Ipapo isu tinokurudzira avo kurodha uye kuisa yazvino vhezheni yeDrama Live Apk.
Virtual Q10 Apk Dhawunirodha Ye Android 
Zed VIP Apk Dhawunirodha Kwa Android 2022